Chrome for iOS dia nohavaozina manampy fanampiana ny kaody QR | Vaovao IPhone
Andro vitsy lasa izay dia nanomboka namoaka ny kinova 56 Google ho an'ny fitaovana rehetra mifanentana izay anolorany ny fampiharana ankehitriny. Ao amin'ireo kinova ho an'ny Mac sy Windows dia manolotra fampahalalana momba izany na azo antoka na tsia ireo tranonkala vangiantsika, raha mbola manana karazana endrika sasany izay tsy maintsy ampidirintsika data. Saingy ny kinova 56 ho an'ny fitaovana finday, indrindra ho an'ny iOS dia mitondra vaovao hafa ho antsika, vaovao ho an'ny sasany dia mety tena ilaina tokoa, raha mampiasa Chrome tsy tapaka amin'ny iPhone, iPad na iPod touch izy ireo. Amin'ity fanavaozana vaovao ity dia afaka mamaky kaody QR i Chrome.
Apple, toy ny mahazatra, dia manohy mampifanaraka sy manome vahaolana an'ireo mpampiasa teratany. Ny kaody QR malaza dia nanjary nilaina ho an'ny mpampiasa maro, izay dia voatery misintona ny rindranasa avy amin'ny antoko fahatelo hahafahana maka sary an-tsaina ireo fampahalalana voarakitra tafiditra ao anatiny. Raha manana iPhone 6s na avo kokoa isika, dia afaka mampiasa teknolojia 3D Touch hiditra mivantana amin'ny scan QR code avy amin'ny bokotra Chrome. Raha toa ka efa antitra ny fitaovantsika dia mila mandeha fotsiny isika ary manoratra QR mba hisehoana ity asan'ny Chrome vaovao ity.
Raha vao tantintsika io dia haseho. efamira izay tsy maintsy ivonantsika ny kaody QR resahina ao ka i Chrome no miandraikitra ny fanokafana ny rohy sy ny fampisehoana ireo fampahalalana mifandraika amin'izany. Nahazo fanatsarana ihany koa ny iPad tamin'ny fahatongavan'ity fanavaozana ity, fanavaozana izany manova ny fihetsiky ny takelaka rehefa te-hifindra isika anisan'ireo misokatra amin'izany fotoana izany. Mazava ho azy, Google koa dia nanararaotra ity fanavaozana ity mba hanatsarana isan-karazany ny fahombiazan'ny fampiharana, ary koa hampihena ny fanjifana bateria.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Chrome for iOS dia nohavaozina manampy fanampiana ireo kaody QR